एकै प्रकारको खाना पटक पटक खान मन लाग्छ ? शरीरले दिइरहेको छ यस्तो संकेत !
हरेक दिन हामीले स्वास्थ्यकालागि विभिन्न प्रकारका परिकार खान्छौं । तर, त्यही खानेकुरामा गरिएको सानो गल्तीका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । कहिलेकाहीँ जानेर वा नजानी सेवन गर्ने सामाग्रीले स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको हुन्छ । कहिले कहीँ हामीलाई एउटै प्रकारको खाना पटक पटक खान मन लाग्छ ।
खाना निकै मिठो भएर भन्दा पनि हाम्रो शरीरमा उत्पन्न भएको विभिन्न रोगहरुले गर्दा हामीलाई एउटै प्रकारको खाना पटक पटक खान मन लाग्न सक्छ ।
विभिन्न समयमा भएका अनुसन्धानले हरेक पटक भोक लाग्दा हामीलाई कुनै पनि विशेष चिज पटक पटक खान मन लाग्छ वा हरेक पटक खानाको सोच आउँदा पेटले त्यही चिज माग्छ भने यस बेला हाम्रो शरीरमा पोषणको कमी भएको बुझ्नु पर्छ । यस्तो बेलामा हामीले डक्टरसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।
गर्मीको मौसम होस् वा जाडो हामीलाई पटक पटक चिसो खान मन लाग्छ भने हाम्रो शरीरमा आइरनको कमी भएको हुन सक्छ । हरेक पटक भोक लाग्दा चिल्लो, तारेका पिरो,नूनिलो चिज बढी खान मन लाग्छ भने यो डिहाइड्रेशनको लक्षण हुन सक्छ ।
शरीरमा पानीको मात्रा नपुग्दा सन्तुलन बिग्रेर यो स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । साथै, शरीरमा सन्तुलन नआउदा हामीले जति सुते पनि हाम्रो निन्द्रा पूरा हुँदैन् । पटक पटक भोक लागेको आभास हुदा यदि हाम्रो मुख र घाँटी सुक्छ भने यसले हाम्रो शरीरको ब्लड सुगरको स्थितिमा परिवर्तन आएको भनेर संकेत दिने गर्छ ।
यस्तो भएको खण्डमा हामीलाई पटक पटक पिसाब लाग्ने समस्या हुन सक्छ । दिनमा ५ –६ पटक क वा त्यो भन्दा धेरै भोक लाग्छ र यसका साथै टाउको पनि दुख्छ भने हामीलाई माइग्रेनको समस्या भएको हुन सक्छ ।
यस्तो स्थितिमा प्राय गरेर हामीलाई चक्लेट तथा गुलियो चिज धेरै खान मन लाग्ने हुन्छ । त्यसैले, हामीले हाम्रो खानेकुरामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटीनयुक्त खानेकुराहरु समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले बढी मात्रामा फलफूल, तरकारी एवं सलाद सेवन गर्नुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा आइरनयुक्त खाना तथा मौसम अनुसारका फलफूलको सेवन गर्नाले शरीरमा थकाइ कम हुन्छ ।